जीन्दगी देखी हार खाँदै ! शिशिर भण्डारीकै घरमा आत्मह’त्या गर्छु भन्दै आए, यि व्यक्ति । यति धेरै ठूलो सहेर बसेका रहेछन् -हेर्नुहोस् रूवाउने (भिडियो सहित) – Manaslu Khabar
September 17, 2019 Banner / भिडियो / रोचक / समाचार / समाज / स्वास्थ्यNo Comment on जीन्दगी देखी हार खाँदै ! शिशिर भण्डारीकै घरमा आत्मह’त्या गर्छु भन्दै आए, यि व्यक्ति । यति धेरै ठूलो सहेर बसेका रहेछन् -हेर्नुहोस् रूवाउने (भिडियो सहित)
काठमाडौं- शिशिर भण्डारी) होचो कदका गोपी मिजारले हामीलाई भेटेपछि आफ्ना सारा दुख सुनाए । गरिबीको मारमा परेका गोपीको दुख सांच्चै ठुलो रहेछ । उनले धेरैपटक आ*त्महत्या प्रयाश पनि गरेछन् ।
मलाई फोनमा पनि गोपीले शिशिर सर म तपाईलाई भेट्न नपाए ६ बर्षको छोरा र श्रीमती सहित पा*सो लाउँछु भनेका थिए ।
हुन त गोपी आफुले जानेको काम पनि गर्छन् । उनी जुत्ता छाता बनाउंछन् । घरमा श्रीमती र ६ बर्षको छोरा छन् । अघिल्लो सन्तानको रुपमा जन्मिएकी अपांगता भएकी छोरीलाई उपचार गराउने क्रममा ऋण गरेर ३ लाख खर्च गरे तर बि*डम्बना छोरीको मृ*त्यु भयो ।
त्यसपछि उनी ऋणमा डुबे । बसेको ठाउंबाट जग्गा धनीले निस्केर जा भन्दैछ, ३ महिनादेखि भाडा तिर्न सकेको छैन, यसैबिच छोराको घां*टीको अ*प्रेशन गर्नु पर्यो ।
यसैबिच गोपीको श्रीमतीले बि*षादीको प्रयोग गरेर छोरा सहित जी*वन त्या*ग्ने प्रयाश पनि गरिन् ।